You are here: Products & Services >> Our Apps (Free) >> Guide To Buddhist Morals
ဤစာအုပ်ငယ်သည် ကမ္ဘာအေးဆရာတော် (အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ) ဘဒ္ဒန ္တပညာဒီပ စုစည်း ရေးသားထားသော ဗုဒ္ဓစာပေ လက်ရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် ယနေ့ခေတ် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် များစွာ စေတနာထား၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပီပြင်စွာရေးသားထားသည်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာရသည့်ပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ်တိုင်ဆည်းပူးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားလှသော ဆရာတော်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အများသိရှိ လေ့လာနိုင်စေရန်နှင့် တိကျလေးနက်လှသည့် ဗုဒ္ဓဝင်ကို အချိန်တိုအတွင်း နားလည်စေရန် Android App တစ်ခုဖြင့် ဓမ္မဒါနပြု ထပ်ဆင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်သည် မူလစာချ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့၊ မဟာဝိဇ္ဇာ (M.A.)ဘွဲ့၊ ဗုဒ္ဓဒေသနာကျမ်းပြု(B.D.) ဘွဲ့တို့ကို ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၅ ခုနှစ်အထိ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု သံဃာ့တက္ကသိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် ဆရာတော်သည် မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ဖြင့် ကျမ်းပေါင်းများစွာ ရေးသားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဝိပဿနာဗိမာန် (World Buddhist Meditation Institute) တည်ရာ ကျောင်းတိုက်၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (အမှတ် ၅၊ ပန်းပင်ကုန်း၊ နာဂလိုဏ်ဂူ အရှေ့ဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့) ဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်သည် ပြည်ပရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာပြည်ဘွား မြန်မာမိသားစုများ၏ သားသမီးများ၊ ပြည်တွင်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများနှင့် ဓမ္မစကူးကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လေ့လာသင်ယူနေသူအားလုံးအတွက် Android App ဗုဒ္ဓဝင် လက်စွဲ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း။
(ယခုစာရေးသူနှင့် စီစဉ်သူ - ဦးမြင့်သိန်း)
Guide To Buddhist Morals App အေပီကေ ဒေါင်းမယ်.
Click the picture or here to download Guide To Buddhist Morals App.